नाममा समाजवादी, व्यवहारमा पुँजीवादी - Radio Roshi
नाममा समाजवादी, व्यवहारमा पुँजीवादी
in राजनीति, रोशी खबर
दिनेश लामा/ हाल निर्वाचन आयोगमा ९७ वटा राजनीतिक दल सूचीकृत छन् । पछिल्लो पटक नेकपा एमाले विभाजित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सूचीकृत भएका हुन् । दुवै दलले पार्टीको नाममा ‘समाजवाद’ शब्द समावेश गरेका छन् । यसरी दलको नाममै ‘समाजवाद’ वा ‘समाजवादी’ विशेषण राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको सङ्ख्या एक दर्जन पुगिसकेको छ ।
नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी दल, नेपाल समाजवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी नेपाललगायत थुप्रै दलले आफ्नो नाममा ‘समाजवाद’ विशेषण जोडेका छन् । हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक दस्तावेजमा ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद–हाम्रा आदर्श हुन्’ भन्ने उल्लेख छन् ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको दस्तावेज अध्ययन गर्ने हो भने ‘समाजवाद’ भन्ने शब्द प्रायः सबैले उल्लेख गरेको पाइन्छ । कुनैले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भनेका छन् भने कुनैले ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भनेका छन् । हाल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी (विप्लप) समूहले वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गर्दै आएको छ । त्यसरी नै माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा हालै गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पनि वैज्ञानिक समाजवादकै उठान गरेको छ । नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीजस्ता मध्यममार्गी धारका दलले प्रजातान्त्रिक समाजवादका कुरा गरेका छन् । यसरी झट्ट हेर्दा सबै दल समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापित गर्न निकै प्रयत्नशील देखिन्छन् । तर समाजवादको मूर्त रूप कस्तो हुन्छ भन्नेमा कोही प्रष्ट छैनन् । दृष्टिविहीनले हात्ती छामेजस्तो बुझाई छ सबैमा ।
हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय के हो भने, समाजवादको दुहाइ दिएर पटक–पटक सरकारमा पुगेका दलहरू नेपालमा यस प्रकारको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नेतिर संवेदनशील भए कि भएनन् ? नेपालको संविधान २०७२ ले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने भनिएको छ । संविधान र दलहरूको दस्तावेजमा यी विषय उल्लेख हुनु मात्र प्रमुख कुरा होइन, हामीले त्यसतर्फ उन्मुख नीति, कार्यक्रम तथा हाम्रा व्यवहार निर्माण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने प्रमुख विषय हो ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले विश्वमा चलेको समाजवादी आन्दोलनको प्रभावमा वि.सं. २०१२ सालमा वीरगञ्जमा सम्पन्न छैटौँ महाधिवेशनबाट समाजवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । जननायक बीपी कोइरालाको अग्रसरतामा नेपाली काँग्रेसले समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्तमा समावेश गरेको थियो । बीपी कोइरालासँग समाजवादी अर्थनीतिको सम्बन्धमा स्पष्ट विचार थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “आर्थिक योजनाको लागि त्यहाँ दुई वटा टेष्ट हुन्छन् । पहिलो आर्थिक उन्नतिलाई बढवा दिनु, दोस्रो सामाजिक न्यायलाई बढवा दिनु । आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायमा मेल खाएन भने मुलुक कम्बोडिया हुन केही बेर लाग्दैन ।”
चाहे त्यो नेता प्रजातान्त्रिक समाजवादको रटान गर्ने होस्, चाहे वैज्ञानिक समाजवादको रटान गर्ने होस्, उनीहरूको जीवनशैली र व्यवहारमा कहीँ कतै समाजवादको गन्धसम्म पाइँदैन । साधारण जनताको तुलनामा आफू अलग्गै वर्ग र विशिष्ट प्रजातिको हुँ भन्ने सोच पालेको देखिन्छ । पुँजीवादीहरूलाई पार्टीको महत्वपूर्ण पददेखि विधायक र मन्त्रीसम्म बनाइएको छ र पनि समाजवादको रटान भने छाडिएको छैनन् । -यो लेख गोरखापत्र अनलाईनमा प्रकाशित छ ।
अमेरिकामा भौतिकशास्त्री प्राडा नकर्मीलाई १ लाख ५९ हजार डलरको पुरस्कार
बेथानचोक गाउँपालिकामा तिज बिशेष कार्यक्रम आयोजना